दाँत र मुख सफा राख्न अपनाउनुस् यी उपाय
चैत ३, २०७४ शनिवार १६:५१:०० प्रकाशित
आगामी मार्च २० (चैत ६) मा अन्तर्राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य दिवस परेको छ। हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा मुख तथा दाँत स्वास्थ्यको बारेमा भ्रम, चेतना अभाव र अन्धविश्वास व्यापक छ। यस्ता चुनौतीलाई चिर्दै सर्वसाधारणमा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र स्वस्थ मुखको साथमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने यो दिवसले प्रेरित गर्छ। संसारभर नै २० मार्चलाई विश्व मुख दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ।
नेपालमा पनि विगत वर्षमा झैँ यसपालि नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको अगुवाइमा दिवस मनाइने योजना छ। चैत २ देखि ८ सम्म मुख स्वास्थ्य सप्ताह दिवसको रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। एक हप्तासम्म देशभरका दन्त अस्पताल र क्लिनिकहरुबाट नि:शुल्क मुख स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।
त्यसैगरी हप्ताभर नै जनचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना हुनेछन्। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन जस्ता सञ्चारमाध्यममा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तर्वार्ता, लेख तथा रचना प्रकाशित हुनेछन्। दिवसका अवसरमा नि:शुल्क दन्त शिविरहरु पनि सञ्चालन हुनेछन्।
हुन त मुख स्वास्थ्य हामीले निकै बेवास्ता गरेको पाटो हो। मुख स्वास्थ्य भनेकै दाँतको समस्या हो र दाँत झरेरै जाने हो भन्ने भ्रम अधिकांशमा छ। हाम्रो सामाजिक आर्थिक लगायत विभिन्न कारणले नियमित मुख स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने परिपाटी न्यून छ। गुणस्तरीय मुख स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण नागरिकको सुलभ अनि सहज पहुँचबाट धेरै टाढा छ। यस्ता कारणले गर्दा मुख स्वास्थ्य समस्याबाट अधिकांश नेपाली ग्रसित छन्।
के हो मुख स्वास्थ्य?
मुखको समस्या भन्नाले दाँत, गिजा, जिब्रो, तालु, गाला, चिउँडो लगायत मुख वरपरको सम्पूर्ण अंगको समस्या बुझ्नुपर्छ। मुख स्वस्थ नहुने मान्छे शारीरिक रुपमा पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैन। सामाजिक रुपमा आत्माविश्वसी पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण उसको गुणस्तरीय जीवनयापनमा ह्रास आइरहेको हुन्छ।
हिजो जे जस्तो भए पनि अब भने हामी मुख स्वास्थ्यबारे जानकार हुनैपर्छ र मुख तथा दाँतको समस्या र रोगहरुबाट मुक्ति पाउने बाटोतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाउनुको उदेश्य पनि यही हो। यो अभियानमा हामी सम्पूर्णले साथ दियौं भने मुख स्वास्थयको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ।
मुख तथा दाँतलाई कसरी स्वस्थ राख्ने?
१. खाने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। गुलियो र दाँतमा टाँसिने खालका खाने कुरा केक, चकलेट आदि धेरै मात्रामा नखानुस्। गुलियो खाइसकेपछि मुख कुल्ला गर्ने, प्रशस्त पानी खाने र मिलेसम्म ब्रस गर्ने गर्नुहोस्। बजारमा पाइने प्रशोधित खानेकुरा चाउचाउ, बिस्कुटभन्दा ताजा खानेकुरा, काँक्रो, गाँजर, मुला, स्याउ, हरियो सागसब्जीमा ध्यान दिनुहोस्।
२. मुखको सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्। हरेक पटक खानेकुरा खाएपछि राम्रोसँग मुख कुल्ला गर्नुहोस्। दिनमा दुई पटक फ्लोराइडयुक्त टुथपेस्टले खाना खाइसकेपछि अनिवार्य रुपमा दाँत माझ्नुहोस्। दाँत को बीचबीचमा अड्कने फोहोरलाई डेन्टल फ्लसको सहायताले सफा गर्नुहोस्। जमेको र ब्रसले नजाने खालको फोहोर छ भने मेसिनको सहायताले दन्त चिकित्सक अथवा डेन्टल हाइजिनिस्टबाट सफा गराउनुपर्ने हुन्छ। साना नानीहरुको दाँत माझ्न अभिभावकले सहयोग गर्नुपर्छ। दाँत नै नभएका ससाना केटाकेटी अथवा दाँत माझ्न नमिल्ने खण्डमा पनि सफा कटन भिजाएर हरेक पटक खाना पछि बच्चाको दाँत र गिजा सफा गरिदिनुपर्छ।
३. दाँत दुखेपछि मात्र उपचार गर्छु भन्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। दुखेर दाँतको उपचार गर्न जाँदा धेरै पैसा र समय मात्र खर्च हुन्छ। बढी दुखाइ र पीडा सहनुपर्ने हुन्छ। सुरुकै अवस्थामा निकै सजिलै रुपमा धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले ६/६ महिनामा दन्त चिकित्सकलाई दाँत र मुखको परीक्षण गराई उपयुक्त र आवश्यक उपाचार गर्ने गर्नुपर्दछ।
यति ३ टिप्सलाई ध्यान दिने हो भने दाँत तथा मुख सम्बन्धी ९० प्रतिशत समस्या समाधान र रोकथाम गर्न सकिन्छ।
१. दसैंमा डाक्टरको सुझाब : रातो र पोलेको मासु नखाने
२. पथरी शनिश्चरे नगरपालिका : ४२ जटिल रोगीलाई १५/१५ हजार वितरण
३. नेपालीको हातधुने अभ्यास न्यून
४. स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्देशकका लागि छनोटमा परेकाको प्रस्तुती र अन्तर्वार्ता कात्तिक पहिलो साता
५. दसैंमा दुई दिन भन्दा बढी ओपिडी बन्द नगर्न देशभरका अस्पताललाई पत्र
६. मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो
७. पूर्वी नाका : विषादीयुक्त खाद्यवस्तु रोक्ने प्रतिबद्धता
८. सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ फिजिसियनमा नयाँ कार्यसमिति चयन
९. ढाड दुख्ने समस्यामा गर्न हुने र नहुने काम, कारण र फिजियोथेरापी
१०. जब दसैंको टीका थाप्न लाग्दा अस्पतालबाट सिकिस्त बिरामी हेर्न फोन आयो...
१. एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क नबढाउने सरकारको निर्णय
२. ढाड दुख्ने समस्यामा गर्न हुने र नहुने काम, कारण र फिजियोथेरापी
३. धेरै पटकको दसैं विदेशी अस्पतालमा बिताएँ : डा बाबुराम पोखरेल
४. मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्योहोर्ने, ३९ संस्था खारेज हुँदै
५. साउनमा छर्किनुपर्ने मलेरिया रोकथामको औषधि तीन महिनादेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र